အဲဗာတန်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့ မီရာလက်စ်နဲ့ အက်ရ်ှလေ၀ီလီယံစ်
အဲဗာတန်အသင်းကနေ အငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတဲ့ မီရာလက်စ် Mirallas နဲ့ ၀ီလီယံစ် Williams
4 Aug 2018 . 6:58 PM
အဲဗာတန်အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား မီရာလက်စ် Mirallas နဲ့ နောက်ခံလူ အက်ရ်ှလေ၀ီလီယံစ် Ashley Williams တို့ဟာ ဖီအိုရင်တီးနား၊ စတုတ်စီးတီးအသင်းတွေဆီ တစ်ရာသီအငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လ်ဂျီယံတောင်ပံကစားသမား မီရာလက်စ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်ကလည်း အိုလံပီယာကော့စ်အသင်းဆီ အငှားနဲ့ သွားကစားခဲ့ရပြီး ဒီရာသီမှာလည်း အဲဗာတန်အသင်းက ရစ်ချာလီဆန်Richarlison ကို ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ မလွယ်တာကြောင့် ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းကို အငှားနဲ့ ထပ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မီရာလက်စ်က ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းနဲ့ ဆေးစစ်မှုအောင်မြင်ခဲ့ရင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာပါ။
မီရာလက်စ်နဲ့အတူ ၀ါရင့်နောက်ခံလူ အက်ရ်ှလေ၀ီလီယံစ် Ashley Williams ကလည်း စတုတ်စီးတီးအသင်းဆီ တစ်ရာသီအငှားစာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်က ဆွမ်ဆီးအသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ အက်ရ်ှလေ၀ီလီယံစ်ဟာ အဲဗာတန်အသင်းအတွက် (၇၃)ပွဲကစား၊ (၃)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပြိုင်ပွဲစုံ (၃၂)ပွဲကစားခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၃၄)နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ဝေးလ်စ်နောက်ခံလူ အက်ရ်ှလေ၀ီလီယံစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်မှာ လိဂ်ချန်ပီယံရှစ်ကို တန်းဆင်းခဲ့ရတဲ့ စတုတ်စီးတီးအသင်းကို တန်းပြန်တက်လာအောင် ကူညီစွမ်းဆောင်ပေးရမှာပါ။
အဲဗာတနျအသငျးကနေ အငှားနဲ့ပွောငျးရှခေဲ့ကွတဲ့ မီရာလကျဈ Mirallas နဲ့ ဝီလီယံဈ Williams
အဲဗာတနျအသငျးရဲ့ တောငျပံကစားသမား မီရာလကျဈ Mirallas နဲ့ နောကျခံလူ အကျရျှလဝေီလီယံဈ Ashley Williams တို့ဟာ ဖီအိုရငျတီးနား၊ စတုတျစီးတီးအသငျးတှဆေီ တဈရာသီအငှားနဲ့ ပွောငျးရှသှေ့ားပွီဖွဈပါတယျ။ ဘယျလျဂြီယံတောငျပံကစားသမား မီရာလကျဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီဝကျကလညျး အိုလံပီယာကော့ဈအသငျးဆီ အငှားနဲ့ သှားကစားခဲ့ရပွီး ဒီရာသီမှာလညျး အဲဗာတနျအသငျးက ရဈခြာလီဆနျRicharlison ကို ချေါယူခဲ့တာကွောငျ့ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရဖို့ မလှယျတာကွောငျ့ ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးကို အငှားနဲ့ ထပျပွီးပွောငျးရှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မီရာလကျဈက ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးနဲ့ ဆေးစဈမှုအောငျမွငျခဲ့ရငျ စာခြုပျခြုပျဆိုသှားမှာပါ။
မီရာလကျဈနဲ့အတူ ဝါရငျ့နောကျခံလူ အကျရျှလဝေီလီယံဈ Ashley Williams ကလညျး စတုတျစီးတီးအသငျးဆီ တဈရာသီအငှားစာခြုပျနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့တယျ။
၂၀၁၆ ခုနှဈက ဆှမျဆီးအသငျးကနေ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ အကျရျှလဝေီလီယံဈဟာ အဲဗာတနျအသငျးအတှကျ (၇၃)ပှဲကစား၊ (၃)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ပွိုငျပှဲစုံ (၃၂)ပှဲကစားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ(၃၄)နှဈပွညျ့တော့မယျ့ ဝေးလျဈနောကျခံလူ အကျရျှလဝေီလီယံဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျမှာ လိဂျခနျြပီယံရှဈကို တနျးဆငျးခဲ့ရတဲ့ စတုတျစီးတီးအသငျးကို တနျးပွနျတကျလာအောငျ ကူညီစှမျးဆောငျပေးရမှာပါ။
by Ko Kyue . 42 mins ago